Samy manana ny famaritany sy izay heveriny ny fandrosoana ny rehetra; fa mety mba ho anisany fampandrosoana ihany ny fampiharana ny fampianarana izay arosoko anao ity. Mazotoa mamaky finaritro ô!
I-Fanehoana fitiavana amin'ny hafa
Ny fitiavana dia fihetsika na fiteny avy ao anaty izay tsy azo toherina ka mitondra sy manome ny fahafaham-po ary fifaliana hoan'ny hafa.
Ara-tsoratra masina: ny Jao. 15:13, maneho amintsika fa: "Ny fitiavana dia mahafoy ny ainy hamonjy ny sakaizany"; Manome ny ainy ho zava-poana manoloana ny hafa. Marihina fa ny fampiharana ireo rehetra ireo eo amin'ny fiainana dia fototra iray izay mampandroso ny tsirairay; indrindra ny maha-kristianina.
Ny fitiavana tsy misy fetra na fanavakavahana no takiana amin'ny rehetra izay mitonona ho kristianina.
- Atao fitsipi-piainana ny fampiharana ny fitiavana
- Atao mitovy fijery ny olona rehetra amin'ny fampiharana azy
- Atao an-tsira-po, tsy mitaky tombony manokana.
Ny fampiharana izany : Soratra Masina Lio.7:47 / Jao.15:13, 17 / Rom.12:9 / IKor.13:4-13 / IKor.14:1 / Efe.4:16 / Efe.5:2 / Kol.2:14 / Kol.2:14 / Heb.10:24 / Heb.13:1 / IPet.4:8
II - Fanehoana fanompoana
Ny fanompoana dia fipetrahana eo ambanin'ny fanapaham-pahefana sy ny filana amin'ny fanompoana atao rehetra.
Ny mpanompon'i Kristy dia manatanteraka ny fanompoana mifanaraka tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Araka ny hita amin'ireto andian-tsoratra masina ireto: Jao.12:26 / Rom.14:15 / IIKor.9:13 / Fil.2:22 / Kol.3:24 / IPet.4:11.
Miainga avy amin'ny alalan'ny hafanam-po ny fanatanterahana ny asa fanompoana izany hoe "ny fo" no mitondra azy satria misy faharesen-dahatr'ilay olona manao azy. Ka noho ny fananany fitiavana no ahafahany manao izany.
Hita izany eo amin'ny fiangonana araka ny Lio.22:26 / Jao.13:1-16. Ny fanompoana izay tanterahan'ireo diakona, katekista, mpiandry ireo dia sehatra iray izay ahitana endrika fanompoana an'i Kristy mivantana.
Noho izany, ny fanatanterahana ireo rehetra ireo dia antoka lehibe izay isehoan'ny fampandrosoana ny fanompoana an'i Kristy eo amin'ny Fiangonana, ary antoka iray hita maso ihany koa amin'ny fampandrosoana amin'ny maha-kristianina.
III - Ny fanomezan-danja ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra
Ny fahasoavana dia fanomezana avy amin'Andriamanitra izay mifanaiky Aminy. Arak'izany ny fahasoavana dia fanekena atolotr'Andriamanitra amin'izay mino Azy; amin'ny alalan'ny Finoana ananany ao anatiny. Izany hoe fifanarahana ataony amin'ny mpanompony.
Noho izany, ny fahasoavana dia azo lazaina ho fanomezana omen'Andriamanitra ho an'izay mitia Azy sy mitady Azy amin'ny alalan'ny FINOANA.
Raha ao amin'ny Soratra Masina no jerena dia miisa enina(06) ihany ny toko sy andininy ao amin'ny Testamenta Taloha izay milaza sy manambara ny momba ny fahasoavana. Kanefa ao amin'ny Testamenta Vaovao kosa dia valo amby fitopolo(78) no isan'ny andininy ahitana izany fahasoavana izany.
Fa ireto no voafantina entina hanaporofoana izany fa tena avy amin'Andriamanitra io fanomezam-pahasoavana io: Efe.2:4-10 / IKor.12:4 / IKor.15:10 / IIKor.12:9
Araka izany, ny fahasoavana dia zavatra tsy tokony nomena antsika nefa nomeny antsika, noho ny famindram-po sy ny fitiavany antsika izany, mba tsy hananantsika ilay fahaverezana eo amin'ny fiainana (Efe.2:8)
Crée le mercredi 28 mars 2018 à 18:10:42
Hajao ny vehivavy
Hajao ny vehivavy fa mafy ny fanaintanana hoentiny indrindra mandritry ny fitondrana vohoka. Tantara mampalahelo iray kanefa naneh[. . .]
Mikarakara ny fahasalamana MG